အိုးထရကျဖို့ဒျအိမျအပွနျ ပရိတျသတျအခဈြတျေျာ ရာဖေးလျဒါဆေးဗားနှငျ့အမေးအဖွအေပွညျ့အစုံ – 7Day Update News
Q.ရာဖေးလ် !နောက်ဆုံးတော့မင်းအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီပေါ့။အိုးထရက်ဖို့ဒ်ကိုပြန်ရောက်လာတာမင်းဘယ်လိုများ ခံစားနေရသလဲ ?
အရမ်းကောင်းပါတယ်ဗျာ။အရင်ကကျွန်တော်အမြဲပြောခဲ့ဖူးသလိုပါဘဲ ဒီကိုပြန်လာရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်အိပ်မက်တွေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာတာမျိုးပါဘဲ။ဒီကကိစ္စတော်တော်များများကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေတုန်းပါဘဲ။ဒီအသင်းကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်။ဒီမှာရှိနေရင်ကျွန်တော်ပျော်တယ်။
Q.အခုကောမင်းလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းဖို့ ဥမင်လှိုင်ခေါင်းထဲကထွက်လာတော့ အရင်ကအမှတ်တရတွေတသီတတန်းကြီးပေါ်မလာဘူးလား ?
ကျွန်တော်ရောဘဲဗျာ !ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ တွစ်တာနဲ့အင်စတာဂရမ်အကောင့်တွေမှာ ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေဆီကမြောက်များလှတဲ့စာတိုပေးပို့မှုတွေကိုရရှိခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့စာတွေမှာ အရမ်းဝမ်းသာဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေဘဲပါပါတယ်။အဲ့အတွက်လည်းယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေကိုအထူးကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းယူနိုက်တက်ပရိသတ်ပါ။ပြီးတော့ယူနိုက်တက်ပရိသတ်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာလည်းအရမ်းကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဘဲမဟုတ်လား။
Q.မင်းကယူနိုက်တက်ပရိသတ်တစ်ယောက်၊ဒါပေမယ့်ဒီညမှာတော့ မင်းအလုပ်ကိုမင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်မဟုတ်လား ?
ဒါအမှန်ပါဘဲ။ဒါကကစားပွဲတစ်ခုပါ၊အဲဒီတော့…ကျွန်တော်နိုင်ချင်ပါတယ်၊အီစတန်ဘူအသင်းနဲ့အုပ်စုကလွတ်ချင်ပါတယ်။ချန်ပီယံလိဂ်မှာ အီစတန်ဘူအသင်းကစားရတာဒီနှစ်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပါ၊အဲ့တာကြောင့်ဒီပွဲကဒီအသင်းအတွက်အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အုပ်စုကလွတ်အောင်လုပ်နိုင်ခြေရှိနေပါသေးတယ်၊အဲဒီတော့ တူရကီမှာလိုဘဲထပ်လုပ်ပြနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကအရမ်းခက်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်။ယူနိုက်တက်ကအရမ်းကောင်းတဲ့အသင်းပါ။အဲ့တာကြောင့်ဒီပွဲကိုအနိုင်ရဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်ထားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
Q.သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အိုလေးကမင်းအပေါ်ကောင်းတဲ့မှတ်ချက်အချို့ပေးခဲ့တယ်နော်။မင်းရောသူ့ကိုထပ်တွေ့ရဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေမလား ?
ဒါပေါ့ !အိုလေးကကျွန်တော်ဒီကိုစရောက်ကတည်းကဒီမှာလူငယ်နည်းပြအဖြစ်စလုပ်နေပါပြီ။ကျွန်တော့်အပေါ်အများကြီးကူညီခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ညီအကိုတွေအပေါ်အများအများကြီးကိုကူညီပေးခဲ့တာပါ။အဲ့တာတွေအတွက် သူ့ကိုကျွန်တော်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယူနိုက်တက်မှာ သူအလွန်ကောင်းတဲ့နည်းပြဘဝကိုရဖို့ကိုလည်း ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Q.နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဒီမှာလက်ရှိကစားနေတဲ့ဘရာဇီးလ်ကစားသမားနှစ်ယောက် Alex Tellesနဲ့Fred တို့ကိုရောမင်းစောင့်ကြည့်ဖြစ်သေးလား ?
ကျွန်တော်သူတို့ကိုသိပါတယ်။ဖရက်ဒ်ကိုကျွန်တော်အလွန်ကြိုက်ပါတယ်။သူကအရမ်းကောင်းတဲ့ Box-to-Box ကစားသမားလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။သူတစ်ချိန်လုံးပြေးလွှားကစားနေတာလေ။သူကနည်းစနစ်ပိုင်းလည်းကောင်းပါတယ်။သူကစားတဲ့ပုံကိုမြင်ပြီးကျွန်တော့်ကြိုက်သွားတာဘဲ။တစ်ချိန်လုံးပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေပြီး အသင်းကစားပုံကိုအကျိုးဖြစ်သွားစေမယ့်အရာတွေလုပ်ဖို့ကို သူအမြဲကြိုးစားနေတာပါ။Tellesလား ? သူကဖြတ်တင်ဘောတွေအရမ်းကောင်းတဲ့သူဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူ့အကြောင်းကိုဖရက်ဒ်လောက်တော့မသိဘူးဗျ။
Credit to UTDMUN
Q.ရာဖေးလျ !နောကျဆုံးတော့မငျးအိမျပွနျရောကျလာပွီပေါ့။အိုးထရကျဖို့ဒျကိုပွနျရောကျလာတာမငျးဘယျလိုမြား ခံစားနရေသလဲ ?
အရမျးကောငျးပါတယျဗြာ။အရငျကကြှနျတျောအမွဲပွောခဲ့ဖူးသလိုပါဘဲ ဒီကိုပွနျလာရတယျဆိုတာ ကြှနျတျော့အိပျမကျတှအေမှနျတကယျဖွဈလာတာမြိုးပါဘဲ။ဒီကကိစ်စတျောတျောမြားမြားကိုကြှနျတျောမှတျမိနတေုနျးပါဘဲ။ဒီအသငျးကိုကြှနျတျောခဈြတယျ။ဒီမှာရှိနရေငျကြှနျတျောပြျောတယျ။
Q.အခုကောမငျးလကေ့ငျြ့ခနျးဆငျးဖို့ ဥမငျလှိုငျခေါငျးထဲကထှကျလာတော့ အရငျကအမှတျတရတှတေသီတတနျးကွီးပျေါမလာဘူးလား ?
ကြှနျတျောရောဘဲဗြာ !ဒါပမေယျ့လညျး ကြှနျတျော့ရဲ့ တှဈတာနဲ့အငျစတာဂရမျအကောငျ့တှမှော ယူနိုကျတကျပရိသတျတှဆေီကမွောကျမြားလှတဲ့စာတိုပေးပို့မှုတှကေိုရရှိခဲ့တာပါ။ကြှနျတျောရခဲ့တဲ့စာတှမှော အရမျးဝမျးသာဖို့ကောငျးတဲ့ကိစ်စတှဘေဲပါပါတယျ။အဲ့အတှကျလညျးယူနိုကျတကျပရိသတျတှကေိုအထူးကြေးဇူးတငျခငျြပါတယျ။ကြှနျတျောကိုယျတိုငျကလညျးယူနိုကျတကျပရိသတျပါ။ပွီးတော့ယူနိုကျတကျပရိသတျဖွဈရတယျဆိုတာလညျးအရမျးကောငျးတဲ့အရာတဈခုဘဲမဟုတျလား။
Q.မငျးကယူနိုကျတကျပရိသတျတဈယောကျ၊ဒါပမေယျ့ဒီညမှာတော့ မငျးအလုပျကိုမငျးလုပျဖို့လိုအပျတယျမဟုတျလား ?
ဒါအမှနျပါဘဲ။ဒါကကစားပှဲတဈခုပါ၊အဲဒီတော့…ကြှနျတျောနိုငျခငျြပါတယျ၊အီစတနျဘူအသငျးနဲ့အုပျစုကလှတျခငျြပါတယျ။ခနျြပီယံလိဂျမှာ အီစတနျဘူအသငျးကစားရတာဒီနှဈကပထမဆုံးအကွိမျပါ၊အဲ့တာကွောငျ့ဒီပှဲကဒီအသငျးအတှကျအရမျးအရေးကွီးပါတယျ။ကြှနျတျောတို့အုပျစုကလှတျအောငျလုပျနိုငျခွရှေိနပေါသေးတယျ၊အဲဒီတော့ တူရကီမှာလိုဘဲထပျလုပျပွနိုငျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ဒါကအရမျးခကျမယျဆိုတာ ကြှနျတျောသိပါတယျ။ယူနိုကျတကျကအရမျးကောငျးတဲ့အသငျးပါ။အဲ့တာကွောငျ့ဒီပှဲကိုအနိုငျရဖို့ဆိုကြှနျတျောတို့အာရုံစိုကျထားနိုငျဖို့လိုပါတယျ။
Q.သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ အိုလေးကမငျးအပျေါကောငျးတဲ့မှတျခကျြအခြို့ပေးခဲ့တယျနျော။မငျးရောသူ့ကိုထပျတှရေ့ဖို့ စိတျလှုပျရှားနမေလား ?
ဒါပေါ့ !အိုလေးကကြှနျတျောဒီကိုစရောကျကတညျးကဒီမှာလူငယျနညျးပွအဖွဈစလုပျနပေါပွီ။ကြှနျတျော့အပျေါအမြားကွီးကူညီခဲ့တာပါ။ကြှနျတျောတို့ညီအကိုတှအေပျေါအမြားအမြားကွီးကိုကူညီပေးခဲ့တာပါ။အဲ့တာတှအေတှကျ သူ့ကိုကြှနျတျောအရမျးကြေးဇူးတငျပါတယျ။ယူနိုကျတကျမှာ သူအလှနျကောငျးတဲ့နညျးပွဘဝကိုရဖို့ကိုလညျး ကြှနျတျောမြှျောလငျ့မိပါတယျ။
Q.နောကျဆုံးအနနေဲ့ ဒီမှာလကျရှိကစားနတေဲ့ဘရာဇီးလျကစားသမားနှဈယောကျ Alex Tellesနဲ့Fred တို့ကိုရောမငျးစောငျ့ကွညျ့ဖွဈသေးလား ?
ကြှနျတျောသူတို့ကိုသိပါတယျ။ဖရကျဒျကိုကြှနျတျောအလှနျကွိုကျပါတယျ။သူကအရမျးကောငျးတဲ့ Box-to-Box ကစားသမားလို့ကြှနျတျောထငျပါတယျ။သူတဈခြိနျလုံးပွေးလှားကစားနတောလေ။သူကနညျးစနဈပိုငျးလညျးကောငျးပါတယျ။သူကစားတဲ့ပုံကိုမွငျပွီးကြှနျတျော့ကွိုကျသှားတာဘဲ။တဈခြိနျလုံးပွေးလှားလှုပျရှားနပွေီး အသငျးကစားပုံကိုအကြိုးဖွဈသှားစမေယျ့အရာတှလေုပျဖို့ကို သူအမွဲကွိုးစားနတောပါ။Tellesလား ? သူကဖွတျတငျဘောတှအေရမျးကောငျးတဲ့သူဆိုတာကြှနျတျောသိပါတယျ။ဒါပမေယျ့ သူ့အကွောငျးကိုဖရကျဒျလောကျတော့မသိဘူးဗြ။